MAITIRO EKUTORA GOOGLE KUTSVAGA BHAWA KUDZOKA PANE ANDROID KUMBA SCREEN - NYORO
Maitiro Ekutora Google Kutsvaga Bhawa Kudzoka pane Android Kumba Screen
Kubva pakuonekwa kwechiratidziro chemumba (kana ichangobva kuiswa isina kubhokisi) kune ruzivo rwevashandisi, pane zvinhu zvishoma zvakave zvine chokwadi nemidziyo yeApple. Iyo yekumusoro pamba skrini ine yechinyakare 4 kana 5 akakosha ekushandisa maikoni padoko, mashoma mapfupi mapikicha kana Google folda pamusoro pavo, wachi / zuva widget, uye Google yekutsvaga widget. Iyo Google yekutsvaga bar bar, yakasanganiswa neGoogle app, iri nyore sezvo tichivimba zvakanyanya neinjini yekutsvaga kune ese marudzi eruzivo. Kubva paATM iri padyo kana paresitorendi kuti uwane zvinorehwa neshoko, munhu wepakati anotsvaga kanokwana kana kusvika kutsva zuva rega rega. Tichifunga nezve chokwadi chekuti kwakawanda kwekutsvaga kunoitwa kuti uwane kukurumidza kuongorora, iyo Google yekutsvaga widget inoramba iri mushandisi inodiwa uye yakaitwa kuti iwanikwe pane Apple zvishandiso kutanga kubva kuIOS 14.
Android OS inobvumidza vashandisi kugadzirisa yavo ekumusoro skrini kune kwavo kufarira uye kubvisa kana kuwedzera akasiyana majeti, pakati pezvimwe zvinhu. Vashandisi vashoma vanowanzo bvisa bha yekutsvaga yeGoogle kuti uwane kuchenesa / kutaridzika kushoma nemifananidzo yavo yakakosha yedoko uye wachi yewadhi; vamwe vanozvibvisa nekuti havazvishandise kazhinji uye netsaona vanozvidzima. Neraki, kuunza iyo yekutsvaga widget kumashure pane yako Android pamba skrini iri nyore basa uye inokutora iwe isingasviki miniti. Ingo tevera iyo rairo mune ino chinyorwa, uye iwe uchadzidza maitiro ekuwedzera Google yekutsvaga bar kana chero chero widget kudzokera kune yako Android kumba skrini.
Maitiro Ekutora Google Kutsvaga Bhawa Kudzoka pane Android Kumba Screen?
Zvambotaurwa, iyo Google inokurumidza yekutsvaga widget inosanganiswa neGoogle yekutsvaga app, saka ita shuwa kuti iwe unayo yaiswa pane yako kifaa. Iyo Google app inoiswa nekumisikidza pane ese maApple madivaysi, uye kunze kwekunge iwe waibvisa nemaoko, foni yako ichave iine app. Paunenge uripo, gadziridza zvakare kunyorera kune yazvino vhezheni ( Google - Zvishandiso paGoogle Play ).
windows 10 yekutambira skrini yakanamatira
1. Dzokera kumashure kune yako Android kumba skrini uye refu-pinda (pombi uye bata) pane isina chinhu nzvimbo . Pane zvimwe zvishandiso, iwe unogona zvakare kupinza mukati kubva kumativi ekuvhura yekumusoro skrini yekugadzirisa menyu.
2. Chiito chinoita kuti sarudzo dzekumusoro dzesarudzo dzioneke pazasi pechiso. Zvichienderana nemashandisirwo emushandisi, vashandisi vanobvumidzwa kutora akasiyana siyana maseru epamba.
windows 10 password yekudzorera chishandiso yemahara
Ongorora: Iwo maviri ekutanga maitiro ekugadzirisa anowanikwa pane yega UI kugona chinja iyo Wallpaper uye wedzera majeti kune iyo yekumba skrini . Yepamberi magadziriso senge shanduko desktop grid saizi, chinja kune yechitatu-bato icon pack, maranho dhizaini, nezvimwe zviripo pane zvakasarudzwa zvishandiso.
3. Dzvanya pa Widgets kuvhura iyo menyu yekusarudza widget.
4. Bhura pasi pasi zviripo widget zvinyorwa kune iyo Chikamu cheGoogle . Iyo Google app ine akati wandei epamba screen widgets ane hukama nazvo.
5. Ku wedzera Google Search bar kubhawa kumba kwako , chete refu-pinda pane yekutsvaga widget, uye chiise panzvimbo yako yaunoda.
6. Iyo saizi yekumusoro yeiyo yekutsvaga widget iri 4 × 1 , asi iwe unogona kugadzirisa upamhi hwayo kune zvaunofarira nekutsikirira kwenguva refu pawijeti uye kudhonza iyo widget miganhu mukati kana kunze. Sezviri pachena, kudhonza miganhu mukati kuchaderedza saizi yewijiti uye kuvadhonza kunze kuchawedzera saizi yayo. Kuti uifambise kumwe kunhu pachiratidziro chemba, pinda-pinda pawijeti uye kana miganhu yangowoneka, chiikweve chero kwaunoda.
windows 10 login dema screen skrini
7. Kuti uiendese kune rimwe jira, dhonza iyo widget kumucheto kwescreen yako uye ubatisise ipapo kusvikira panhivi yepasi ichichinja otomatiki.
Kunze kweiyo Google yekutsvaga widget, iwe unogona zvakare kufunga kuwedzera Chrome yekutsvaga iyo inovhura otomatiki mitsva yekutsvaga mune itsva Chrome tabo.
Bvisa bhawa reGoogle Kutsvaga kubva kuImba Homescreen yeApple
Maitiro Ekuuraya Android Mapurogiramu Anomhanya Mune iyo Mbiri
Maitiro Ekubvisa WhatsApp Boka Kutaurirana
Ndizvo; iwe wakangokwanisa kuwedzera Google yekutsva bhaa kumashure pane yako Android chidzitiro chemba. Tevera maitiro akafanana kuti uwedzere uye gadzirisa chero imwe widget pachiratidziro chekumba.
windows 10 mapikicha eapp app
mahwindo gumi akarembera kugamuchirwa
windows 10 gadziriso yakanamatira pa0
logitech g930 yakundikana kutamba bvunzo toni
sei isiri ch chrome iri kushanda
windows 10 internet inodonhedza